Muqdisho Archives - Axadle
Siciid Deni oo ka degay magaalada Muqdisho
Hogaamiyaha Dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Safarka Deni oo ay ku wehliyaan xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Puntland ayaa ah ka qeyb galka wadahadalo xal loogu raadinayo khilaafka doorashooyinka. Dhiggiisa Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa asbuucii lasoo dhaafay ka dagay magaalada Muqdisho, isagoo kulamo hordhac ah la qaatay musharixiinta, gudoomiyaha Aqalka Sare iyo diblomaasiyiinta. Labada…
Muqdisho oo aas qaran loogu sameynayo AUN Cali
Cali Mahdi Maxamed, Madaxweynihii 4-aad ee Soomaaliya oo Arbacadii 10-kii Maarso 2021 ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho. Aaska ayaa waxaa ka qeyb galaya madax kala duwan sida Hogaamiyayaasha Dowlada Federaalka ee waqtigeedu dhamaaday, Madaxweynayaashii hore, Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyada iyo marti sharaf kale, ehelada iyo asxaabta. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa loo yareeyay isticmaalka joogtada ah ee gawaarida iyo mootooyinka waxaana ciidamo la…
Rag hubeysan ayaa seddex ku dilay magaalada Muqdisho
Duqa, gaar ahaan buundooyinka maanta waxaa lagu dilay seddex wiil oo dhalinyaro ah, waxaana fuliyay koox wata gaari ay leeyihiin raaxada mustaqbalka dadka deegaanka. Ka dib markii uu ka cararay goob lagu toogto, ciidamada amniga ayaa goobta gaaray iyagoo sameeyay baaritaanka in la dilo dadkuna ay ka shakiyaan. Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan waxaa ku soo kordhayay dilalka ay geysanayaan kooxaha hubeysan, inkasta oo hay’adaha amniga dowladda Federaalka aysan ka hadlin falalkan…
Cabdi Siyaad kooxo hubaysan ayaa ku dilay magaalada Muqdisho
Allaha u naxariistee Cabdi Siyaad Geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya ayay kooxo hubeysan ku dileen degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Dilku wuxuu ka dhacay riyo suuq ah oo lagu iibiyo Degmada Muqdisho, waxaana lagu toogtay Mudane Siyaad Barre mustaqbalka ayuu ka cararay si uu saameyn ugu yeesho deegaanka. Ciidamada amaanka dowladda federaalka oo saldhig ku leh meel aan ka fogeyn suuqa ayaa tagay goobta, iyagoo xiray aagga uu dilku ka dhacay, waxayna…